Mpitondra Môtô Ao Arzantina: Miady Amin’ireo Fepetra Manavakavaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2014 5:15 GMT
Olona nosamborina nolazaina ho nangalatra môtô, Buenos Aires, 19 Aprily 2012, avy tamin'i Claudio Santisteban. Demotix.
Nitambatra manodidina ny teny faneva hoe “Tsy Takelaka fametahana laharana ny Olona“, manohitra lalàna iray vaovao ireo mpitondra môtô any Arzantina, ny Didy fanapahana 224/14, izay lazain'ireo mpanao hetsika ireo fa fanavakavaka azy ireo ao anatin'ny fanaraha-maso ny làlana.
Araka ilay lalàna vaovao, tokony hametraka ny laharana famantarana ny môtô-any eo amin'ny satroka arolohany ireo mpitondra môtô any Arzantina, ary manao akanjo mamerina hazavana miaraka io famantarana io koa ao aoriany. Ny tsy fanarahana ireo fehezan-dalàna ireo dia mety handoavana lamandy lafo tokoa, sy mety hamoizanao ny fiaranao ary ny fahazoan-dalana mamily. Manome alalana ireo tanàn-dehibe ihany koa ireo fepetra vaovao mba hamerana ny fivezivezen'ireo mpitondra môtô, amin'ny fametrahana làlana voatokana ary fotoana voatokana ho an'ny làlana, mifanaraka amin'ny isan'ireo mpitaingina.
Vao haingana, nanao andrana mitovy amin'ireny fepetra ireny ireo governemanta isam-paritra manerana ny firenena, mety hoe antso faobe atao an'ireo mpifidy, izay hifidy ny filoha manaraka, ny taona 2015.
Hetsik'ireo mpitondra môtô any Buenos Aires.
Sary avy tamin'ny mpampiasa Facebook Javier Fo To, Nahazoana alalana ny fampiasàna azy.
Tamin'ny voalohany, tsara ny ankamaroan'ny fihetsik'ireo vahoaka nanoloana ilay Didy laharana 224/14, satria tsy mahakasika mivantana ny ankamaroan'ny vahoaka ireo fehezan-dalàna vaovao ireo.
@danielscioli vamos por mas daniel… espero que salga todo bien, acá en almte. Brown. tamb. Estamos necesitando más policias en recorridas
Nanjohy ny “Task force” -n'ireo mpitandro filaminana kaominaly i Avellaneda tamin'ny 11. Manana ny foibe kaominaly avokoa ireo lapan'ny tanàna miisa 40 nandritra ny nifehezako ny Vonjy maika tato amin'ny Fiarovana.
Aleo ampitomboina, Daniel… Manantena aho fa mandeha tsara daholo ihany koa ny zavatra rehetra aty Almirante Brown. Mila mpitandro filaminana bebe kokoa isika eny amin'ny arabe.
I Daniel Scioli , governoran'ny faritanin'i Buenos Aires, io “Daniel” andefasana hafatra ao amin'ny bitsika io. Toerana iray ao amin'ny Faritanin'i Buenos Aires i Almirante Brown, mitoetra ao atsimon'ny tanàn-dehiben'i Gran Buenos Aires.
Tato anatin'ny taona vitsivitsy izao, nanozongozona ny finoana an'ireo manampahefana ny fitombon'ny isan'ny herisetra mahery vaika. Nampivanàka tanteraka ireo mpitandro filaminana ny toa fahalalahana hita mivaingana ananan'ireo mpanao heloka mifehy ny arabe. Amin'izany toe-javatra izany, maro amin'ireo vahoaka no vonona handray tsara izay fepetra rehetra hapetraka hampihena ny heloka bevava.
Tao amin'ny Aterineto, nanao adihevitra mafana momba ilay fitsipika ho an'ireo mpitondra môtô ireo Arzantina avy amin'ny fomba fijery samy hafa. Ao amin'ny Twitter, mitaraina izao i mari.peque:
@danielscioli #LasPersonasNoSePatentan y a los #motociclistas nos marcan como “presuntos” delincuentes y eso es anticonstitucional
Tsy takelaka fametahana laharana ny olona, ary ny fanaovana ireo mpitondra môtô hoe “ahiahiana” ho mpanao heloka dia tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana.
Maneho hevitra toy izao i Cristina Pérez:
Sarotra ho ahy ny mahatakatra hoe manao hetsikamanohitra ny fitsipika mba hisian'ny fiarovana bebe kokoa ireo mpitondra môtô. Misy ireo olona izay matin'ny fanafihan'ireo motochorros (mpanendaka mampiasa môtô). Ilaina ny fiaraha-miasa.
Mihamitombo ny herisetra
Ao amin'ny Change.org, nanamarika ilay mpampiasa Aterineto iray manana anarana hoe Andres Peterson fa tokony handray fepetra ny governemanta, amin'ireo “motochorros” (mpanao heloka izay mampiasa môtô ho entina manendaka):
Omaly, niditra tany anaty tranon'olona roa ireo motochorros nitaingina môtô, notaterina androany fa olona iray no maty ary roa no maratra tamin'ny fidirany. Misy zavatra tsy mety mihitsy ao Rosario ao.
Mangataka fepetra hentitra ihany koa ireo mpitondra môtô hiadiana amin'ny heloka bevava, satria matetika mangalatra môtô ireo mpangalatra mba hanendahana ny hafa, na hivarotra izany ho toy ny kojakoja efa voasaratsaraka. Avelany eo ireo môtô ireo ary soloiny kojakoja hafa, izay mahatonga ireo mpitandro filaminana tsy afaka hahafantatra sy hitazona ireo mpanao asa ratsy.
Ny bitsik'i PeladoMoterociclista:
#noaloschalecos , ahora no sólo nos van a robar las motos, también nos van a partir la cabeza para sacarnos el chaleco y el casco!!!!!
Lavina ilay akanjo fiarovana, tsy hangalatra ny môtô fotsiny intsony izy ireo amin'izao, fa handeha ho vakiany ihany koa ny lohanay mba hangalarany ny satro-by sy ny akanjonay!!!!!
Hatramin'izao, mbola mitohy ho olana hatrany ireo mpanao làlan-dririnina, satria tsy omen'ireo mpitandro filaminana azy ireo ny sazy mifanaraka tsara amin'ireo heloka nataony, sahala amin'ireo mpanao heloka avotsotra hiverina eny amin'ny vahoaka, izay miverina amin'ny fiainana mpanao heloka indray.
Tena loza mihitsy ny tsy fahampian'ny fandriampahalemana iainana ao amin'ny faritanin'i Buenos Aires. Rahoviana no horaisina ny fepetra hamahàna io olana io, tena marina? Ampy izay ny kabary.
“Marihana sahala amin'ireo biby fiompy”
Ny fitakiana azy ireo hanao akanjo mamerina hazavàna misy laharana voamarika ao an-damosina no resaka tena mahasosotra ireo mpitondra môtô. Araka ny lazain'ireo ‘lehibe mpitarika ny hetsi-panoheran'ny mpitondra môtô “manitsakitsaka ny zon'izy ireo amin'ny mety tsy maha olo-meloka azy, izay napetraky ny Lalam-panorenana Nasionaly, ilay didim-panjakàna.” Raha lazaina amin'ny fomba hafa, manahy ireo mpitondra môtô fa mety ho eritreretina ho mpanao ratsy izy ireo noho ny karazam-pitaterana entiny hivezivezena fotsiny. Sady amin'izay, tsy misy fepetra noraisina sahala amin'izany ho an'ireo mpandeha fiara, ohatra, izay ampiasain'ireo mpanao ratsy ihany koa mba hangalarana na hakàna olona an-keriny.
Ilay heverina ho eson'ilay fametrahana marika amin'ireo mpitondra môtô. Loharano: Motociudadanos. Nahazoana alalana ny fandefasana azy.
Ny 5 Aogositra, ny Kaomitim-Paritr'i Buenos Aires ho an'ny Fahatsiarovana, notarihan'i Adolfo Pérez Esquivel, filoha fahiny tao amin'ny fampanoavanaary nahazo ny Loka Hugo Cañón sy Nobel, dia nitaona ny fitsaràna ambony ao an-toerana mba hamono io didim-pitndràna io, noho ilay Lalàna 220/14 tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana, izay manome fahefana vonjy maika ho an'ny Governora Scioli, tafiditra amin'izany ireo fitsipika voalaza ao amin'ilay Didy 224/14.
Mikasika ireo fetra vaovao, ho an'ireo mpitondra môtô, manazava ilay Kaomisiôna hoe “voahitsakitsaka ny zo hitovy sy ny tsy fanavakavahana, satria sady miendrika fanilikilihana no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny rohy napetraka ao amin'ilay lalàna navoaka amin'ireo karazana heloka vaovao, ny tsy fandriam-pahalemana, sy ny fanilihana vondrona – izay mametraka ny fampiasàna ny môtô ho toy ny ahazoana endrika mpanao ratsy”.
Nifampitaona niaraka ireo mpitondra môtô, ny alarobia tamin'ny 6 hariva, nanoloana ny “Obelisk” an'i Buenos Aires, ary tany amin'ireo tanàna maro hafa manerana ny firenena. Ny faran'ny herinandro sasany, miala any amorontsiraka izy ireo mba hakany afovoan-tanàna, izay ampiharan'ireo mpitandro filaminana mafimafy kokoa ilay fitsipika vaovao, indraindray aza lasa tafahoatra mihitsy izany amin'ireo mpitondra môtô.
Any amin'ireo tambajotra sosialy, mandefa matetika ireo fitarainany amin'ny governemanta ireo vondrona mpitondra môtô. Misy vondrona iray aza, manana birao fandefasam-baovao mihitsy, izay namorona tolotra hanaovana fanambaràna maro nilain'ny vahoaka:
Nanao antso hafa ireo mpanao fihetsiketsehana, sahala amin'ny hoe, mangataka fiarovana ara-dalàna ho an'ireo olon-tsotra ary fikambanan'olon-tsotra, toy ny Argentina Association of Motor Vehicle Users (Fikambanana Arzantina an'ireo Mpampiasa Môtô), ary ny firaketana ireo fangatahan'ny olon-tsotra ao amin'ny biraon'ny mpanelanelana ny vahoaka amin'ny fanjakàna, ny Ivontoerana Nasionaly Manohitra ny Fanilikilihana, fankahalàna vahiny, sy ny Fanavakavahana ara-piaviana, ary ny Fanarahamaso ny Fanilikilihana ao amin'ny Haino aman-jery. Tsy ela akory izay, namoaka ity masoivoho farany ity fa manome vahana ny fiahiahiana an'ireo mpitondra môtô ireo ny media, amin'ny fampiasana ny fomba fiteny hoe “motochorro”.
Manolotra hevitra hafa maro, afaka asolo ireo fitsipika vaovao ireo ny mpitondra môtô, ao anatin'izany ny fanavaozana ny antontan-taratasy fanaraha-maso, ny dingana arahana amin'ny fitazonana sy fisavàna ireo ahiahiana ho mpangalatra môtô (amin'izao fotoana izao, alain'ny mpitandro filaminana fotsiny ilay môtô ary avotsony ilay voarohirohy), ary fanaraha-maso henjana kokoa eny amin'ireo faritra fanaovana raharaham-barotra.